Indawo yokuhlala - Hengyi Electrical Co., Ltd.
Ama-TV, amafriji, ama-air conditioner, amakhabethe okubulala amagciwane, imishini yokuwasha izitsha, oveni bama-microwave kanye nemikhiqizo kagesi yekhompyutha yomuntu siqu. Ngezinga lokuphila elikhulayo, ukusetshenziswa kukagesi kwabahlali kukhuphuke kakhulu. Ikakhulukazi esikhathini esiphakeme sasehlobo, umthwalo wokungenisa endlini ukhuphuka kakhulu, futhi okwamanje okusebenzayo okusebenzayo kuyanda kakhulu.
Ngenxa yokungabikho kwama-harmoniki emphakathini noma okuqukethwe okuncane kwe-harmonic (THDi≤20%), Ukufaka i-capacitor ehlakaniphile yamandla kagesi afanelekile kufanele ifakwe egumbini lokusabalalisa amandla kagesi aphansi womphakathi ukuze kunxeshezelwe amandla kagesi asebenzayo (isixazululo 1) .
Ukuba khona kwama-harmoniki emphakathini kepha kungeqi okujwayelekile (THDi≤40%), ukufaka i-anti-harmonic low voltage power capacitor ehlakaniphile egumbini lokusabalalisa amandla kagesi omphakathi ukuthola isinxephezelo samandla asebenzayo (isixazululo 2).
Isethenjwa somdwebo wesikimu